WeChat Video App review APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » tutorials » ဗီဒီယို App ကိုပြန်လည်သုံးသပ် WeChat
WeChat အမှန်ပင် App ကို Chat ကိုကမ္ဘာကြီးထဲမှာအားကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့ပြိုင်ဘက်၏အချို့အေးမြအင်္ဂါရပ်များကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေး Whatsapp သာ၏အိပ်မက်မှာနိုင်ပါတယ်။
အပြည့်အဝစကေးပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, WeChat ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းထုတ်စစ်ဆေး ဒီမှာ.
သင်ကလိုအပ် incase, ဒီမှာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်:
စာသား, ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ, အသံ, ဗီဒီယို, တည်နေရာခွဲဝေမှုနှင့်ထို့ထက် ပို. သုံးထားသော Message မိတ်ဆွေများက။ 500 အဖွဲ့ဝင်များမှတက်နှင့်အတူအုပ်စုချတ်ကိုဖန်တီးပါ။
အသံ & VIDEO ခေါ်ဆို:
high-quality အသံနှင့်ဗီဒီယိုလောကရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုရန်တောင်းဆိုထားသည်။ အုပ်စုတစ်စုကဗီဒီယို9လူတွေမှတက်နှင့်အတူခေါ်ဆိုထားပါ။
လမ်းညွန်ရှင်းပြမှာကောင်းသောမဟုတ်လော ခလုတ်တစ်ခု၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Real-time တည်နေရာမျှဝေပါ။
သင်အကြိုက်ဆုံးအချိန်လေးဘယ်တော့မှမေ့။ Post ကိုဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခဏစီးတွင်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေဖို့ပို။
TIME က Capsule (NEW!):
သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာပုံရိပ်ကိုတကွက်မျှဝေပါ။ သူတို့ 24 နာရီအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားရှေ့၌သင်တို့အချိန် Capsule ထဲမှာ post ဖို့တိုတောင်းသောဗီဒီယိုများအားအသံဖမ်း
ပျော်စရာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ Browse, သင့်အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းနှင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူစတစ်ကာများအပါအဝင်ချတ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြကူညီရန်စတစ်ကာများကာတွန်းကား။
CUSTOM စတစ်ကာ (NEW!):
ထုံးစံစတစ်ကာများနှင့် selfie စတစ်ကာများနှင့်အတူပိုပြီးထူးခြားတဲ့ chatting လုပ်ပါ။
အားလုံးသင်အဖိုးတန်ဖုန်းကိုသိုလှောင်မှုနှင့်အချိန်ချွေတာ, အပိုဆောင်းတပ်ဆင်မလိုအပ်ပါဘူးသော WeChat app ကိုအတွင်းမရေမတွက်နိုင်တဲ့ Third-party န်ဆောင်မှု။
ပျော်စရာရှိသည်နှင့် (အချို့ဒေသများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ) WeChat Mini ကိုဂိမ်းများနှင့် Tencent ဂိမ်းများ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးအတွက်သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်။
• WeChat လစာ:
(ကို select လုပ်ပါဒေသများတွင်ရရှိနိုင်ပါ) WeChat Pay ကိုနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဦးဆောင်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုအင်္ဂါရပ်များအဆင်ပြေပျော်ရွှင်ခံစားပါ။
(ကို select လုပ်ပါဒေသများတွင်ရရှိနိုင်ပါ) စူပါအနိမ့်မှုနှုန်းမှာကမ္ဘာအဝှမ်းမှမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။
ကို LANGUAGE အတွက်အထောက်အပံ့:
20 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ဒေသတွင်းနှင့်မိတ်ဆွေများ '' မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ခဏပို့စ်များကိုဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
•ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုံခြုံမှု: သင်သင့် privacy ထိန်းချုပ်၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုပေးခြင်း, WeChat ယုံကြည်မှုအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ကိုသာ messaging app ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို App ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နောက်ထပ် features တွေ WeChat
~ ကို Message ပို့ပြီးပြန်ခေါ်
တစ်ဦးကမှားမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျတျောသို့မဟုတ်မှားယွင်းကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုသတင်းစကားကိုစလှေတျ? ကိုအသာပုတ်နဲ့ကိုင်ထားသည့်စလှေတျတျောသတင်းစကားနဲ့ 'သတိရပါ' 'option ကိုရွေးပါ။ ဒါဟာ Chat history ကိုကနေမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးချင်းစီအဆက်အသွယ်၏ချက်တင်မျက်နှာပြင်တွင်, ညာဘက်ထိပ်ထောင့်မှာပေါ်သုံး dot ခလုတ်ပေါ်ထိပုတ်ပါ။ ဒီနေရာတွင်ကြောင်းအဆက်အသွယ်အတူချက်တင်ကိုစိတ်ကြိုက်အဘို့အမျိုးစုံ options များရပါလိမ့်မယ်။
~ မိုဘိုင်းထိပ်တန်း Up ကို
WeChat ငွေပေးချေမှုစနစ်အားသင်သည်များစွာသောအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများအဘို့တစ်ခုမှာရိုးရှင်းတဲ့အသုံးပြုမှုမိုဘိုင်းနံပါတ်များကိုတက်ထိပ်ဆုံးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ WeChat အကောင့်မှသင့်ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်မည်သူမဆိုရဲ့အရေအတွက်ကတက်ထိပ်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။
~ သတိပေးချက် Timing
သင် WeChat အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့အခါရဲ့ start နဲ့ဆုံးအချိန်ကိုမသတ်မှတ်ခွင့်ပြု WeChat တစ်ခု option ကိုရှိပါတယ်။
ဒီချတ်နှင့်ချိတ်-up, လူကိုရှာဖွေအခြားကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သင်တုန်လှုပ်အင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်သောအခါ, app ကိုသင်သည်သူတို့၏ apps များလှုပ်န်းကျင်ကလူကိုရှာတွေ့စတင်သည်နှင့်ချက်ချင်း chat နဲ့ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အသုံးပြုသူတစ်ဦးနှင့်အတူသငျသညျချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။
~ Web ပေါ်ရှိ WeChat ခံစားကြည့်ပါ
ဒီ app ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး feature ကိုသငျသညျ, သင့်မိတ်ဆွေများအဆက်အသွယ်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာသုံးပြီးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်အနီးရှိအခြားအသုံးပြုသူများရှိလူများစကားပြောနိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်များ, မိတ်ဆွေများနှင့်သင့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာနေသောလူများ၏အမည်များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် WeChat app ကိုအလွန်လွယ်ကူသည်။
သင်ခန်းစာ ဗီဒီယို WeChat